रक्सी, चामल र खुशी (गफ) | Social, musical and literary material
रक्सी, चामल र खुशी (गफ)
April 7, 2012 nrsubba Leaveacomment
कुरा त्यस्तै वि.स.२०५४ सालतिरको हो भन्छन् लामिछाने । उनी गफलाई रोमाञ्चित बनाउँदै भन्छन्– पहाडि जिल्ला भोजपुर जाने सिलसिलामा दिनभरि हिंडेर साँझ बल्ल पुगियो दिदीबहिनी डाँडामा तर खानलाई भने केही छैन भनेर पसलेहरूले बताए पछि उनका साथी रुम्दाली र उनी निरास भए । त्यहाँ डाँडामा भएका दुइतीन घरमा बुझ्दा कतै पनि खाना पकाउनको लागि चामल वा पीठो केही किन्न भेटिएन । अब लामिछाने र रुम्दाली फसादमा परे । एकठाउँ खाने नाममा रक्सी चाहिँ भेटियो र अलिकति सुकुटी माछा पनि झुन्ड्याएको देखियो । यही भए पनि खानै पर्यो भन्दै एक बोतल रक्सी लामिछानेले किन्यो । एकदुई चुस्की तानेपछि अलि पर पोकोबाट चामल झिकेर खाना पकाउने सुरसार गर्दै गरेको एकजना भरियामाथि उनीहरूको दृष्टि पर्यो । बिहानदेखि खाना खान नपाएर पेट चाउरी परेकोले लामिछाने अघि बढे र बडो भरोसापूर्वक भरियादाईलाई सोधे “एकमाना चामल किन्न देऊ न” । लामिछानेले प्रस्ताव मात्र के गरेका थिए तातेको कराईको तेलमा पानी पर्दा तेल पड्किएझैं भरियादाई रातोपिरो भएर तोक्मा उझ्याउँद कड्किए “तलाई बेच्न ल्याएको चामल देखिस्” । भोकशोक बिर्सेर लामिछाने लुसुक्क फर्किए ।
यसरी लामिछानेको भालेसातो भरियादाईले खाइ हाल्यो । लामिछाने निन्याउरो मुख लिएर रुम्दालीकोमा फर्किए पछि दुवैजना मिलेर एकछिन रुञ्चे हाँसो हाँसे र सुरुप्प खाए । एकछिन पछि एउटा विचार आयो र कूटनीति चाल्न लामिछाने पुनः तम्सियो । रक्सिको बोतल लिएर ऊ भरिया छेऊ गयो र बिस्तारै भन्यो “हैन दाई ! थाकेर आउनु भएको होला यसो अलिकति थाप्नोस् न !” भरियाले लामिछानेको मुखमा निकैबेर हेर्यो, माथिदेखि तलैसम्म नियाल्यो र ढाकरबाट एउटा स्टिलको गिलास झिक्यो र रक्सी थाप्यो ।
अब यो रक्सीको असर कस्तो पर्छ होला भनेर लामिछाने र रुम्दाली अलिपर अघिकै ठाउँमा बसेर चियाएर हेर्न थाले । करिव आधा घण्टापछि भरियादाईमा रक्सीको असर देखियो । अचम्म ! भरियादाई लामिछाने र रुम्दालीको छेऊमा आयो र भन्यो “अघि चामल चाहियो भन्या हैन, लौ थाप !” ।
यसपछि उनीहरूको भान्सा एउटै भयो । चामल, माछा, गुन्द्रुक, टमाटरको तरकारी र नूनभुटुनको पैसा रुम्दालीले तिरिदिए । भात भरियाले नै पकायो र तीनैभाईले पेटभरि खाए । यसपछि लामिछाने र रुम्दाली त खुशी हुने नै भए उता भरियादाई पनि खुशी भएछन् क्यार ! यही खुसीमा उनले भात, तिहुन पकाउने भाँडाकुँडाहरू पनि एक्लै माझिदिए ।
आज करिव डेढदशक पछि यही कुरा सम्झेर लामिछाने र रुम्दाली उत्तिकै रोमाञ्चित देखिन्छन् । रक्सीले त्यत्रो काम गरेकोमा यो काम लाग्ने चीज नै रहेछ भनेर लामिछाने साथीभाइसित गफ गर्छन् । तर त्यसको केही वर्षपछिको एउटा घटनाले उनलाई यो बानीबाट छुटायो । त्यसताका उनलाई मासिक तलबको हिसाबकिताब आफ्नी पत्नीलाई बुझाउन सधैं गार्हो पर्दथ्यो । एकचोटी साथीभाईलाई रक्सी खुवाउँदा बनेको बिल तिर्दा तिर्दा यसबाट मुक्त हुन उनलाई छ महिना जति लागेको थियो यही तीतोले उनलाई रक्सी खान रोक्यो उनी निन्याउरो पारामा भन्छन् ।
रक्सीसम्बन्धी तीतो र मीठो दुवैखाले अनुभव सुनाउँने क्रम चलिरहेको छ । उनलाई एउटा जिज्ञासा म यसरी राख्छु – “यतिबेला खाइन्छ कि खाइदैन ?” । लामिछाने जवाफमा अनायास हातले टाउको र टुप्पी सुम्सुम्याउँदै भन्छन्– “हेर्नोस् ! आजकल मैले टुप्पी निकै लामो पालेको छु, कसैले रक्सी खाने हो ? भनेर सोधे म यसैलाई हल्लाई दिन्छु र तर्काइ दिन्छु” । यो सुनेर, उनको हाउभाउ देखेर हामी पेट मिचिमिचि हाँस्न थाल्यौं ।
चैत्र २४, २०६८ विराटनगर ।
Previous Postतीन स्रष्टा सम्मानितNext Postमोरङगीत